Archive du 20190104
Mpikamban’ny HCC Misy mandrahona ho faty ?
Maro be ny fitoriana napetraka eny amin’ny HCC. Ny votoatin’izay voasoratra ao anatiny anefa no zava-dehibe. Raha izaho mpisolovava ity aza no nanao an’io, dia « requête » iray monja kanefa mafonja no napetraka tao, hoy ny mpisolovava Hanitra Razafimanantsoa.
Vahoaka mitady ny fahamarinana Mizotra any amin’ny fandresena
Azo lazaina ho efa fandresena iray lehibe ny nahafahana nanomboka ny tolom-bahoaka mpitaky ny fahamarinana tetsy amin’ny 13 mey nanomboka ny 29 desambra 2018 teo.
Tolon’ny 13 mey Miantso ny fiangonana, ny mpiasa, ny sendika,…
Tsy arakaraka ny maha andro fiasana sy antenantenan’andro azy, fa tena rakotra vahoaka tanteraka ny teny amin’ny “Parvis” anoloan’ny Lapan’ny tanànan’Analakely omaly alakamisy 3 janoary.
Marc Ravalomanana “Ny fanajana ny fahamarinana no hampisy fitoniana eto”
Nisy tokoa ny fihaonana teo amin’Atoa Marc Ravalomanana sy ny vondrona iraisam-pirenena ny alatsinainy 31 desambra 2018 lasa teo, araka ny fanamarinam-baovao natao.
Maka Alphonse « Miharatsy ny endrik’i Madagasikara »
Ao anatin’ny vanim-potoana sarotra ny firenena ka ilaina ny fametrahana ny fitoniana mba tsy hanaratsy an’i Madagasikara any ivelany. Raha manaraka ny vaovao maneran-tany dia lazaina fa hiditra krizy indray i Madagasikara, hoy ny filohan’ny Komitin’ny fampihavanam-pirenena (CFM),
Hafatra ho anareo
Jiolahy no tiana hakarina Mba handidy sy hanjaka, Ka totofana ny marina Dia tsy avela hahazo laka ?
Minisitry ny Fitsarana Miantso ny rehetra mba ho tony
Nitondra firarian-tsoa sy hafatra amin'izao fiandohan'ny taona vaovao izao, i Harimisa Noro Vololona, mpitahiry ny fitombokasem-panjakana, minisitry ny fitsarana ho an’ny mpitsara, ny mpiraki-draharahara ary ny mpandraharaha ny fonja.
Foloalindahy Malagasy Misy disadisam-pibaikoana ?
Hafahafa ny zava-niseho momba ny fibaikoana ny mpitandro ny filaminana teny an-kianjan’ny 13 mey omaly tapak’andro maraina.
Mbola Rajaonah, Fidèle Razarapiera, Fanirisoa… Notorian’ny Primatiora
Notorian’ny fiadidiana ny praiminisitra i Mbola Joseph Rajaonah, Fidèle Razarapiera, Rahajason Harry Laurent na Rolly Mercia, Eliane Virginie Bezara (Ninie Doniah), Fernand Cello, James Ratsima, Fanirisoa Ernaivo,…
Ligin’ny baolina kitra - Bongolava Miditra amin’ny andro faha-4 ny fiadiana ny ho tompondaka
Miditra amin’ny andro faha-4 ankehitriny ny fifaninana baolina kitra fiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’ny baolina kitra any Bongolava tarihan-dRakotoarimino Andrianina Desire “Dr Dezy” izay efa nanomboka tany amin’ny voalohandohan’ny volana desambra 2018 tany.
Edito Anatra ny lasa
Anatra ny lasa ! Efa nanomboka ny taona 1972 no natao batisa ho toeram-pitolomana ny kianjan’ny 13 mey
Toerana hijanonan’ny taksibrosy isaky ny kaominina Hokarakarain’ny Hafari Malagasy
Mbola vitsy ireo toerana tokony hijanonan’ireo taksibrosy mivoaka eto an-drenivohitra, indrindra fa ny mihazo ny lalam-pirenena faharoa.
MATY NISY NANDORO
Vehivavy iray no maty nisy nandoro tao an-tranony. Tetsy Mahitsy no nitrangan’izany ny atoandron’ny alarobia teo.
Mizotra tsikelikely any amin’ny fandresena na dia am-pilaminana aza ankehitriny ny fahitana ny tolon’ireo vahoaka mpitaky ny fahamarinana etsy amin’ny kianjan’ny 13 mey.
Hoavin’ny ankizy sy tanora Malagasy Velom-panahiana ny ray aman-dreny
Tanora 10 hatramin`ny 24 taona ny 32%-n`ny Malagasy ary ao anatin`ny fianarana ny ankamaroany. 31,2% anefa no mahavita fianarana eny amin’ny fanabeazana fototra ary afaka mamaky teny sy manoratra.
Fiatrehana ny fotoam-pahavaratra Vonona tanteraka APIPA
Vonona tanteraka amin’ny fiatrehana ny fotoam-pahavaratra ny APIPA, raha araka ny fanazavan’ny tale jeneraliny Rateloson Philippe.
Adala midaroka eny an-dalambe Olona maromaro no lasibatra teny Anosizato Atsinanana
Mitombo isa hatrany ankehitriny ireo adala mirenireny eto an-drenivohitra. Ankoatra ny lehilahy dia marobe ihany koa ny vehivavy izay marihina fa samy manana ny fomba fihetsehany.
COUM 67 HA Tetezana kely efa nandratra olona
Tetezan-kazo kely iray no ahiana hamono olona mihitsy etsy Coum 67ha mihazo ny lalam-baovao raha tsy misy ny fanamboarana azy.
Fampindramam-bola madinika Efa manomboka mampijaly mpanjifa
Nanomboka ny taona 2008 no niroborobo fatratra ny sehatra fampindramam-bola madinika (microfinance) teto Madagasikara.
Fahantran’i Madagasikara Hiha lalim-paka hatrany raha ….
Voasokajy ho anisan’ny firenena faha-5 mahantra indrindra eran-tany i Madagasikara. Ny 80%-n’ny mponina dia miaina amin’ny vola latsaky ny 1,9 dolara na 6 970 Ariary eo isan’andro (1dolara=3485Ar).
Ady amin’ny fanday mpanimba voly Haroso ny voly miandry orana
Mirongatra tanteraka ny fidiran’ny fanday biby kely mpanimba voly « chenille légionnaire » amin’izao fotoam-pahavaratra izao.